निषेधाज्ञाको असर ! काठमाडौँको एक कोठामा बाउ छोरी यस्तो अवस्थामा भेटिएपछि हेर्नुस, परिवारको बिजोग भयो रुवाबासी (भिडियो) – Annapurna Daily
निषेधाज्ञाको असर ! काठमाडौँको एक कोठामा बाउ छोरी यस्तो अवस्थामा भेटिएपछि हेर्नुस, परिवारको बिजोग भयो रुवाबासी (भिडियो)
On May 15, 2021 126
काठमाडौ । १ बर्ष अगाडि मात्र दोलखाबाट उपचारको शिलशिलामा काठमाडौ आएका हुन डिल्ली बहादुर कार्की । दोलखा निबासी डिल्ली बहादुर केही बर्ष अगाडि रुखबाट खसेर आफनो ढाड भाच्न पुुगे त्यसपछि उनी उपचारका लागि यहाँ आए ।
आएको एक बर्षमा लकडाउनको चपेटामा परेर अहिले के खाउ के लाउ भाको छ । न त आफू बसेको घरको भाडा तिर्न सकेका छन न त दुुई छाक खानानै । गाउमा खेती किसानी गर्दागर्दै रुखको हागो लाछिएर करिब २० फिट तल खस्दा यस्तो अवस्थामा आईपुगे । काठमाडौ आएपछि पनि यसैका लागि करिब १२—१३ लाख खर्च गरे डिल्लीले । घर बारी सबै बेचेर ७ लाख रिन लगाएर यतिसम्म अवस्थामा पुगेका छन ।